बिरामी भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस् मृत्युको कारक बनिएला नि ? « प्रशासन
अस्पतालमा दैनिक हुने यस्ता घटना हामीलाई सामान्य लाग्न सक्छ। तर यस्तै सामान्य कारणले एउटा रोगको उपचार गर्न अस्पताल भर्ना भएका बिरामीलाई नयाँ भाइरस वा ब्याक्टेरिया संक्रमण भएर ज्यानै जाने घटना बढेका छन्।
अस्पतालमा कुरुवा र उपचारमा संलग्न जनशक्तिले बारम्बार हात धुने, अस्पताल फोहोर व्यवस्थापन, मास्क तथा पन्जाको सदुपयोग, नियमित सरसफाइदेखि उपचार प्रक्रियामा हुने त्रुटिले यस्ता घटना बढेको चिकित्सक बताउँछन। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौं ।